ကျွန်ုပ်တွင် ED ရှိပါက၎င်းကိုအသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးရန်လိုအပ်သည်မဟုတ်ပါလော။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
“ အသုံးပြုပါသို့မဟုတ်ပျောက်ပါစေ” လို့ပြောတဲ့ခိုင်လုံတဲ့မှတ်ဥာဏ်တစ်ခုရှိတယ်။ လူတွေဟာသူတို့ရဲ့စိုက်ထူမှုကိုနှိမ်နင်းဖို့အလွန့်အလွန်ညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသူတို့ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်သွားမှာကိုကြောက်ကြပြီးတုန့်ပြန်မှုကင်းမဲ့ခြင်း ပိုဆိုး။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့စိုက်ထူမှုရရှိဖို့အတွက် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ penises တွေကို "သတိရဖို့" လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ငါ rebooting လုပ်နေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ငါဟာ porn ကိုကြည့်ပြီး ၄၃ ရက်အတွင်းမှာအော်ဂဇင်မကြည့်ခဲ့ဘူး၊ ငါတိုတိုရပ်တန့်တက်အဆုံးသတ်ပေမယ့်ငါတကယ်ဖြေလျော့ရန်လိုအပ်သည်။ ငါချိန်းတွေ့ရန်နှစ်ရက်အကြာနှင့်ငါမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာငါလိင်ဆက်ဆံဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်သောကြောင့်, ငါအချို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုခံစားရတယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကအလုပ်ဖြစ်တယ်သေချာအောင်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါဘဲ။ ငါဒီနေ့စနေ၊ တနင်္ဂနွေတစ်ပတ်တောင်တောင်ခေါ်သွားတယ်။ ငါမြင်နေတဲ့မိန်းကလေးဟာအားလပ်ရက်ခရီးထွက်နေချိန်မှာငါဒီရက်စနေနေ့မှာလိင်ဆက်ဆံဖို့အခွင့်အရေးမရှိဘူး။
“ အသုံးပြုပါသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးပါ” သည်အမျိုးသားများသည်အသက်အရွယ်မရွေးလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် (orgasm မပါဘဲ) လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စိုက်ထူခြင်းများသည်သွေးအားလိင်အင်္ဂါများမှတဆင့်စီးဆင်းစေသည်။
သို့သော်၊ “ အသုံးပြုပါသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးပါ” သည် porn နှင့်ဆက်စပ်သော ED ခံစားနေရသူများအတွက်ပြforနာမဟုတ်ပါ။ သူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုသုံးရင်ဖြစ်ပါသည်, အရာယာယီသူတို့ရဲ့ဦးနှောက် numbed သိရသည်။ တို့ကရှငျးပွခဲ့သကဲ့သို့ပင်မိမိတို့၏လိင်အင်္ဂါ, ဿုံကျန်းမာများမှာ -Norman Doidge, MD.
မိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုသူများအဖို့လိုအပ် reboot လုပ်ပါ အာနိသင် restore ရန်။ တနည်းအားဖြင့်လေးလံသော porn ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ED ဇီဝကမ္မအချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအတွက်အားလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရပ်တန့်ခဲ့သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုကနေစကားပြောတစ်ခုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရောဂါလက္ခဏာကိုတွေ့ရတဲ့ဒီ visitors ည့်သည်တွေထဲမှာလအနည်းငယ်လောက်၊ တိုး အာနိသင်။ ဦးနှောက်ကိုပြန်သာမန်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်ပြန်မှဖြစ်တဲ့အခါ။ ဤအတောအတွင်းသို့သော်အချို့သောအတွေ့အကြုံကိုပင် နည်းသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု။ ၎င်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးရက်သတ္တပတ်များစွာကြာနိုင်သည်။ ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိကြနှင့်။ စိတ်ရှည်ပါ။
၎င်းသည်တန်ပြန်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ သင့် ဦး နှောက်ကိုအနားယူပါစေ၊ ၎င်းသည်မကြာမီလုပ်ဆောင်မှုအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ခြေကျင်းကျိုးပါက၎င်းသည်မပျောက်မချင်းအသုံးပြုရန်ကိုရပ်တန့်ရန်သင်သိလိမ့်မည်။ သင်အဲဒါကိုလမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်“ စမ်းသပ်” ခြင်းကိုဆက်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကသင့်ရဲ့ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုနှေးကွေးစေလိမ့်မယ်။ မှတ်မိဖို့ Key ကိုအချက်များ:
ပြန်ဖွင့်ယာယီဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရေရှည် abstinence အကြံပြုကြပါဘူး။
သငျသညျရှိသည်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုများမှာ nocturnal စိုက်ထူ။
သင်၏လိင်စိတ်ပြန်မလာပါကဤမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများတွင်ပါသောအကြံပြုချက်များကိုစမ်းကြည့်ပါ - အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအပေါ် Started နှင့်ငါ့ reboot (Erectile အလုပ်မဖြစ်) ရှည်လျားလွန်းတာဖြစ်ပါတယ်
စကားမစပ်, Cialis နှင့် Viagra သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏သွေးကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုယာယီပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ သင်၏ ဦး နှောက်အတွင်းရှိအားနည်းချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ပလတ်စတစ်အပြောင်းအလဲများကိုကုသရန်သူတို့သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ သင့် ဦး နှောက်သည်အချိန်နှင့်လိုအပ်သည် ဆွ၏မရှိခြင်း။ ၎င်းသည်ပုံမှန် sensitivity နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုသို့မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်ပြန်သွားနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ဒါကအလိုအလျောက်ဖြစ်ပျက်; မင်းလုပ်စရာမလိုဘူး do ကဖြစ်ပျက်စေရန်ဘာမှ။
Reboot လုပ်သွားသူကိုယောက်ျားတွေထံမှ comments:
ယခုတွင်ငါသည်၎င်းကိုအသုံးပြုပါသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးပါစေဟူသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမ ဦး ဆုံးအတွေ့အကြုံရှိသည်။ ငါပြောသလောက်ကတော့စိုးရိမ်စရာဘာမှမရှိဘူး။ နေ့ ၃၂ ရက်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်အော်စကာလုပ်တယ်။ အဲဒါကအတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ခုပါ၊ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းစေတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါသုက်ပိုး၏အရည်အသွေးတစ်ခု - သုတ်ရည်လွှတ်၏အရည်အသွေးဆွေးနွေးတင်ပြကြပြီမဟုတ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏ cum သည်ထူထပ်၊ ပေါများခြင်းနှင့်နွေးထွေးခြင်း (ပူပြင်းလွန်းခြင်း) ရှိသည်ဟုဘယ်တော့မှမခံစားခဲ့ပါ။ အဲဒီမှာတစ်တန်ရှိခဲ့သည် - ငါစိမ်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ - ၃၂ ရက် O မပါ ၀ င်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏သုက်ပိုးအရေအတွက်စစ်ဆေးရန်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်လုပ်စရာမလိုပါ။ ကျွန်ုပ်၏ PMO အပေါင်းအသင်းအားလုံးသည်သင်၏ဆီးကျိတ်နှင့် ၀ တ်မှုန်များသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နေကြောင်းပြန်လည်အာမခံသည်။ အဆိုပါပြproblemနာကို ဦး နှောက်ထဲမှာဘယ်နေရာမှာမဆိုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်မရဲ့အမှိုက်ဟာတစ်နေ့ကို ၂-၄ အော်ဂဇင်နှစ်နဲ့နှစ်အကြာမှာကာလကြာရှည်စွာအနားယူဖို့လိုနေပြီလို့ကျွန်မခံစားရတယ်။ အိုးငါ loland ဖြုန်းတီးသောသုက်ပိုး!
အကြှနျုပျ၏လိင်တံနေဆဲလည်းလမ်းကိုဆင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ ငါကပထမတော့စိုးရိမ်ခဲ့တယ် အထူးသဖြင့်သင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိန်းမစိုးနှင့်တူသည်ဟုခံစားရသောပြန်လည် reboot အဆင့်အချို့တွင်။ သင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာလှုံ့ဆော်မှုအားလုံးနှင့်အတူမိမိကိုယ်ကိုအရှိန်မြှင့်လိုက်သောကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့် Flatline ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
သင်သည်သင်၏စိုက်ထူအားကောင်းလာစေရန်နှင့်အလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ချင်လျှင်, ကြိုးစားကြည့် sexercise.